6 Hevitra marketing amin'ny atiny ambany amin'ny teti-bola ho an'ny orinasa madinidinika | Martech Zone
Fantatrao sahady fa tsy manana ny teti-bolan'ny marketing hifaninana amin'ireo “zazalahy lehibe” ianao. Fa ny vaovao tsara dia izao: ny tontolon'ny varotra nomerika dia nampitovy ny saha sy tsy mbola nisy toy izany. Ireo orinasa madinidinika dia manana toerana sy taktika marobe izay mahomby sy lafo vidy.
Ny iray amin'ireny, mazava ho azy, dia ny marketing amin'ny atiny. Raha ny marina dia mety ho lafo indrindra amin'ny paikady marketing rehetra izany. Ireto misy tetika marketing amin'ny atiny izay tokony hampiasain'ny orinasa kely tsirairay:
Tambajotra sy fiaraha-miasa
Ny orinasa eo an-toerana dia mahatakatra ny hasarobidin'ny tambajotra - fametrahana fifandraisana amin'ireo orinasa hafa eo amin'ny fiaraha-monina iray ho tombontsoan'ny tsirairay. Amin'ny teny nomerika dia azo atao ihany koa izany. Mety hitranga amin'ny fomba maro ny tambajotra:
Mametraka a LinkedIn mombamomba anao ary midira amin'ny vondrona mifandraika rehetra. Mandraisa anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'ireto vondrona ireto, fantaro fa manam-pahaizana amin'ny sehatry ny orinasanao ianao ary manaova fifandraisana. Ireo fifandraisana ireo dia mety hiteraka orinasa eo alohanao, amin'ny alàlan'ny referrals sy tolo-kevitra.
Mitadiava orinasa sy bilaogy mifandraika ary mametraha fifandraisana amin'ireo tompona / bilaogera ireo. Mametraha fifandraisana mifanasoa, mifanomeza. Aza adino anefa fa ireo fifandraisana ireo dia tsy maintsy misy loharano malaza sy mifandraika amin'izany, raha tsy izany dia iharan'ny sazy SEO ianao.
Rehefa manangana ireo fifandraisana misy ifandraisany ireo ianao, dia eritrereto ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana fampiroboroboana, ny tolotra tapakila, sns. Hanampy ny mpanjifanao izany ary hanaparitaka ny marikao amin'ny mpihaino hafa.
Mihazona bilaogy iray
Ity dia fitaovana marketing maharitra nefa mety hahomby. Ny vidiny? Fotoana sy ezaka be dia be mamorona lahatsoratra bilaogy mahasarika sy mahaliana izay heverin'ny tsena kendrenao ho sarobidy. Ny famahanana bilaogy dia tsy maintsy mamaha olana amin'ireo mety ho mpanjifanao; tokony hosoratana amin'ny famoronana izy ireo; tokony ampidirina ao ny sary sy haino aman-jery hafa; tokony ho zaraina mora foana izy ireo; ary tokony ho mora vakina sy scanina izy ireo.
Afaka mianatra zavatra betsaka momba ny fitorahana bilaogy ianao amin'ny alàlan'ny famakiana bilaogy malaza sy mahomby an'ny mpifaninana aminao sy ireo sokajy mifandraika amin'izany. Ny fanambinao dia tsy ho amin'ny fanamboarana ireo sombin-javatra ireo fotsiny fa tsy tapaka sy tsy tapaka amin'ny famoahana anao. Misy loharano sy fitaovana afaka manampy anao hanao izany.
Raha mitady mpanoratra fifanarahana ianao, dia azonao atao ny manandrana serivisy fanoratana izay manana serivisy fanoratana, toy ny EssaySupply or FlashEssay.
Raha te hanao fikarohana ianao dia afaka miditra OnlineWritersRating ary mahazoa tsikera momba ny serivisy fanoratana kopian'ny maso ivoho malaza
Zahao ireo tranonkala manolotra mpanoratra tsy miankina, toa ny Upwork ary Fivver. Azonao atao ny mandinika ny zavatra niainan'ny mpanoratra sy ny fahombiazany ary manandrana vitsivitsy.
Raha manapa-kevitra ny hanoratra sy hitazona bilaogy ny tenanao ianao, na na dia misafidy ny hampiasa mpanoratra vita fifanarahana aza ianao, dia mbola mila mahita hevitra lohahevitra ho an'ireo bilaogy ireo ianao. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny manamarina ireo mpifaninana aminao ary jereo hoe iza amin'ireo lahatsoratr'izy ireo no be mpitia indrindra. Raiso ireo hevitra ireo ary hatsarao izany. Azonao atao ihany koa ny mijery ireo tranonkala toy ny Buzzsumo hahita ny lohahevitra malaza indrindra amin'ny akany.
Manamboatra Pitch Elevator
Mila 30 segondra famoronana ianao teny azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, raha misy manontany, Inona no ataonao? Antsoina hoe an haavon'ny ascenseur satria tokony ho vitanao ny hanome azy manontolo amin'ny fotoana ilakarany ascenseur miakatra na midina. Ity pitch ity dia tsy maintsy omanina amin'ny famoronana ary hifantoka amin'izay lanja entinao amin'ny mpanjifanao / mpanjifanao. Azonao atao ny mandinika ny sasany ohatra tsara ho an'ny ascenseur ary manaova lamaody iray ho anao. Tadidio izany. Ary asao ny karatra fandraharahanao ho vonona hatolotra amin'ny fotoana iray.
Na dia maro aza no mino fa tsy mandaitra intsony ny mailaka (fenoina fampiroboroboana sy dokam-barotra ny boaty misy ny olona), tsy izany no izy. Raha ny marina, amin'ny antsalany, ny ny fiverenana isaky ny $ 1 laniana amin'ny marketing amin'ny mailaka dia $ 38. Mandany vola be izany.
Ny lakileny dia ny fanatanterahana izany tsara ka ny olona manara-maso ny mailak'izy ireo dia te hanokatra ny anao. Ireto misy torohevitra vitsivitsy:
Aza spam. Aza mividy lisitra ary mandefa mailaka faobe - tsy mandeha izy ireo
Ampitomboy tsikelikely ny lisitra ataonao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fampahalalana vaovao
Ampizaro ny lisitra arakaraka ny toerana misy ny vinavinanao sy ny mpanjifanao amin'ny diany mividy. Tokony hahazo mailaka isan-karazany izy ireo.
Halalino ireo mailaka azonao manokana avy amin'ireo orinasa manintona anao. Inona no mahatonga anao hanokatra ny sasany amin'izy ireo fa tsy ny hafa? Ity dia tokony hanome anao hevitra lehibe momba ny asa-tananao manokana.
Mifantoha amin'ilay andalana. Raha maharesy lahatra izany dia manana vintana misokatra lehibe kokoa ianao. Ampiasao misy fitaovana hamoronana lohateny lehibe, raha tsy mahatsapa famoronana ianao. Ary, ireo fitaovana ireo dia azo ampiasaina amin'ny lohateny / lohatenin'ny lahatsoratry ny bilaoginao sy ny lahatsoratry ny media sosialy.
As Shelly Crawford, Lehiben'ny departemantan'ny atiny ao amin'ny ResumeCentre, dia nilaza hoe: "Elaela izahay vao namantatra an'ity zavatra rehetra momba ny marketing mailaka ity. Nanipy mailaka tany fotsiny izahay, nanantena ny hiteraka valinteny isan-jato aza. Raha vantany vao nanapa-kevitra ny hikaroka izany lojika izany izahay, hampiasa angona sy fizarazarana, miaraka amina famoronana ilaina be dia be amin'ny andalana, dia nahita fiakarana misokatra be izahay. ”
Tsy mandeha intsony izany. Ary mety efa namaky ampy tsara momba ny varotra media sosialy ianao hahafantarana izao manaraka izao:
Tsy afaka amin'ny sehatra rehetra ianao - hanaparitaka tena manify ianao ary tsy ho afaka hitazona tsara ny iray amin'izy ireo.
Chris Mercer, CEO an'ny Citatior, hoy izy:
Ny mpanjifanay dia tanora kokoa, mpianatra indrindra. Mifantoka amin'ny Facebook, Instagram ary Snapchat izahay satria fantatray fa ho hitanay eo izy ireo. Ny torohevitro dia ny mandeha any amin'izay fantatrao fa misy be dia be ny mpihaino kendrenao ary mandefasa betsaka araka izay azo atao. Hahazo valiny ianao.
Ataovy ny fikarohana raha te hahalala izay misy ny mpihaino anao amin'ny media sosialy, ary alao ny sehatra roa ambony hametrahana ny fisianao. Avy eo, apetaho matetika ireo. Azo tantanana kokoa io.
Diniho ny lohahevitry ny famoahana lahatsoratra. Ny tiana hambara dia ny fametrahana fifandraisana manokana sy fifandraisana amin'ny mpihaino anao. Afaka manana vazivazy ianao androany, teny manentana ny fanahy ho an'ny andro. Hiverina hatrany ny mpanaraka ary hizara izy ireo.
Ampidiro ny mpanjifanao - ampiasao ny fanadihadiana sy ny fanontanina; asongadino ny mpanjifa ao amin'ny hafatrao. Asehoy ny lafiny maha olombelona ny orinasanao. Betsaka ny orinasa manao zavatra tsara. Araho izy ireo ary alao tahaka ny fomba fanaovan-javatra.
Sary sy haino aman-jery - Tsy azonao atao izany raha tsy misy izany
Araka ny fikarohana, ny olona manaraka torolàlana misy lahatsoratra sy fanoharana dia mahavita 323% tsara kokoa noho ny olona manaraka torolàlana tsy misy sary.
Tsy mbola mora kokoa ny nampiasa sary (sary, infografika, sary, ary na ny sary mihetsika aza) tao anaty atiny. Ary ny horonan-tsary dia nanjary rafitra malaza indrindra amin'ny fampitana ny atiny amin'ireo mpijery. Ny olona dia hijery horonantsary betsaka lavitra noho ny mamaky lahatsoratra maro.
Ny fikarohana Google ho an'ny fitaovana hamoronana iray amin'ireo sary hita maso ireo dia hitondra isa marobe, maimaim-poana ny maro. Tsy misy fialan-tsiny fotsiny amin'ny tsy famoahana sary sy horonantsary betsaka araka izay azonao atao mba hampidirana ireo vokatrao na serivisinao, hanasongadinana anao sy ny ekipanao, hanazava na hanome ahoana no fiofanana sns.
Azonao atao koa ny manandrana ny atin'ny zava-misy nampiana sy virtoaly - misy fitaovana hanatanterahana izany koa.
Aza adino ity: ny mpanjifa ankehitriny dia te hahita ny maha-izy azy avy amin'ny orinasa. Ny maha-mpankafy anao amin'ny famokarana sary sy horonan-tsary dia fomba iray lehibe hanaovana an'izany. Arakaraka ny tsy ara-dalàna no tsara kokoa.
Amin'ny maha tompona orinasa kely anao dia sarobidy ny fotoanao. Saingy ny marketing dia tokony ho ampahany lehibe amin'ny fotoana sy ezaka laninao. Tsy afaka mitombo ianao raha tsy misy izany. Saingy ny marketing dia tsy mila "mamaky banky" raha ny teti-bolanao. Manana safidy marobe ianao izao amin'ny marketing mora vidy - ampiasao.
Tags: buzzumochris mercercitatiorhaavon'ny ascenseurmailaka Marketingessaysupplyfivverflashessaylohatenin-gazetyneomantambajotraonlinewritersratingmanohy rescentcentrefifaneraseranaupwork
James Daily dia mpanoratra matihanina ary manam-pahaizana momba ny varotra atiny. Rehefa tsy tafiditra amin'ny asa mifandraika amin'ny asa izy dia manaraka ny tombontsoany maro hafa, ao anatin'izany ny astronomia, psikolojia ary sinema. Aza misalasala mifandray aminy amin'ny alàlan'ny bilaoginy manokana Brainished.